अमेरिकासँग कोरोनाभाइरस भ्याक्सिनको २० लाख डोज कहाँबाट आयो ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/अमेरिकासँग कोरोनाभाइरस भ्याक्सिनको २० लाख डोज कहाँबाट आयो ?
काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशमा कोरोनाभाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको २० लाख डोज तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् । सीएनबीसीका अनुसार शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले २० लाख डोज भ्याक्सिन तयार अवस्थामा रहेको र यसको सुरक्षा र प्रभावकारिताको पुष्टि हुनासाथ बजारमा जाने बताएका हुन् ।
यद्यपि ट्रम्पले कुन कम्पनीले यति परिमाणमा भ्याक्सिन तयार गरेको हो भन्नेबारे केही बताएनन् । ट्रम्पले निकै छिटो राम्रो समाचार प्राप्त हुन सक्ने बताए । शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलनमा भ्याक्सिन तयार अवस्थामा रहेको बताउँदै ट्रम्पले यो भ्याक्सिनको प्रयोगभन्दा पहिले वैज्ञानिकहरुबाट अनुमति पप्त हुने प्रतिक्षा रहेको बताए । ट्रम्पले वैज्ञानिकहरुले यसलाई सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको पुष्टि गरेमा अमेरिकीहरुलाई यो भ्याक्सिन दिइने बताए ।
ट्रम्पले यो भ्याक्सिनलाई सुरक्षित घोषित गर्नुभन्दा पहिले ठूलो परिमाणमा मानव ट्रायल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ट्रायलपछि मात्र वैज्ञानिकले यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिने ट्रम्पले बताए । ट्रम्पको दावी पनि अमेरिकाका प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ र राष्ट्रपतिको साथमा प्रेस कन्फ्रेन्मा अक्सर देखिने डा. एन्थोनी फाउसीले भने सिएनबीसीसँग कुरा गर्दै आफूले राष्ट्रपतिको बयानका विषयमा टिप्पणी गर्न नसक्ने बताए । उनले भ्याक्सिनबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले भ्याक्स्नि तयार गर्नको लागि ५ कम्पनीसँग काम गरिरहेको छ । यसअघि डा. फाउसीले मंगलबार एक कार्यक्रममा अर्को वर्षको सुरुवातसम्म लाखौं डोज भ्याक्सिन तयार हुन सक्ने बताएका थिए । अमेरिकाका मोडर्ना, नोवाभ्याक्स, फाइजर कम्पनहिरु कोरोनाभाइरसको भ्याक्सिन विकासमा काम गरिरहेका छन् । यी कम्पनीहरुलाई आफ्नो भ्याक्सिनमा यति विश्वास छ कि मन्जुरी पाउनुभन्दा अघि नै उत्पादन सुरु गरेका छन् । मोडर्नालाई सबैभन्दा अगाडि मानिएको छ ।
भारतले चीनसँगको सीमामा गोर्खा सैनिकलाई पठाउन लागेको भन्दै आयो यस्तो डर लाग्दो चेतावनी..
सुशान्तकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीको फोन जाँच गर्दा कसैले नसोचेको यस्तो आश्चर्यजनक खुलासा
कोरोना सं,क्र,मि,त देशका नागरिक भन्छन्, ‘हामीले जीवनमा यस्तो दिन भोँ,गु,ला भन्ने कहिल्यै सोंचेका थिएनौं’